Wepamusoro 8 Ehlers Danlos Syndrome Scholarship 2022
Wepamusoro 8 Ehlers Danlos Syndrome Scholarship
March 2, 2022 Ezeya Tadheo
Iri peji rinopa ruzivo nezve Ehlers Danlos Syndrome kudzidza kuti vanhu vakwanise kubatwa zvakanyanya neiyi syndrome kuzadzisa zviroto zvavo zvedzidzo.
"Ehlers Danlos Syndrome" hauna kumbonzwa nezvazvo, iwe? Kana iwe hauna kujairana nemutsara? Unogona kunge wakasangana nevanhu vane chirwere ichi uye usingatozive kuti chii.
Zvakanaka pano tiri kukuisa kunze kwerima…
Chii chinonzi Ehlers Danlos Syndrome (EDS)?
EDS iboka rezvinetso zvakagarwa nhaka zvinokanganisa kana kushayisa simba nyama inobatanidza inotsigira ganda, majoini, pfupa, madziro emitsipa yeropa, tendon, ligaments, uye dzimwe nhengo dzakawanda nematumbu.
Kukanganisa mune zvinobatana matishu kunokonzeresa zviratidzo nezviratidzo zveaya mamiriro ayo anotangira kubva zvinyoro nyoro majoini kusvika kuhupenyu hunotyisidzira matambudziko.
Ehlers Danlos Syndrome inokodzera kuremara here?
Kune nhanho dzeEDS, uye kana iwe uine iyo yakapfava iyo inokutendera iwe kuti ushande saka ungangokodzera mabhenefiti mabhenefiti.
Nekudaro, kana iwe usingakwanise kushanda nekuda kwezviratidzo zvakakomba kubva pairi unozogona kuve akaremara uyezve nemamwe mabhenefiti mabhenefiti anosanganisira Social Security Disability Insurance (SSDI) uye Supplementary Security Income (SSI).
Tine chinyorwa chakatoburitswa pamusoro pekubatsira kwehurema pamusoro, ndokuti Social Security Disability Insurance (SSDI) uye Supplementary Security Income (SSI). Iwo mabhenefiti anopiwa nehurumende kune vakaremara, uye kana ukazadzisa zvese zvinodiwa iwewo zvaunogona kuwana kubva kubhenefiti iyi.
Verenga zvakawanda pano.
Vanhu vane EDS vanoda kuenderera mberi nedzidzo yavo kukoreji, yunivhesiti, kana chirongwa chekudzidzisa vanogona kunyorera maEhlers Danlos masomo atakanyora pane ino peji. Imwe yeaya masomo anotakura zvakasiyana zvinodiwa zvaunofanira kusangana kuti uzviwane.
Pasina imwezve ado, ngatiendei kune aya Ehlers Danlos Syndrome kudzidza…
Ehlers Danlos Syndrome Scholarships
EveryLife Foundation RAREis Scholarship Fund
Iyo Hannah Bernard Chirangaridzo Scholarship
Bryson Riesch Paralysis Foundation (BRPF) Scholarship
Karman Healthcare Mobility Kuremara Scholarship
Hannah Ostrea Chirangaridzo Koreji Scholarship
Iko hakuna kwakawanda kudzidza kune vanhu vanotambura neEDS, asi pane zvakakwana zvakaremara zvakaremara kudzidza kwavanogona kunyorera. Tora ivo pazasi:
Sangano reAllLife rinosimbisa iyo RAREis Scholarship Fund kubatsira vanhu vanorarama nechirwere chisingawanzove nekutsigira zvishuwo zvavo zvedzidzo. Iwo kudzidza kwacho kunopihwa gore rega uye kukosheswa pamadhora zviuru zvishanu kusvika makumi matatu nevanogamuchira
Vanyoreri vanofanirwa kuve vanopfuura makore gumi nemanomwe ekuberekwa, vachigara muUnited States, uye vanoonekwa vaine chirwere chisingawanzo fanika seEhlers Danlos Syndrome (EDS). Uyu mubairo uri pakati peEhlers Danlos Syndrome kudzidza sezvo chiri chirwere chisingawanzo uye iwe unogona kunyorera mubairo uyu.
Vanyoreri vanofanirwa kuronga kunyoresa kana kutonyoresa mune yakasarudzika yepamusoro institution muUnited States kuteedzera undergraduate kana kudzidza chirongwa. Iwo masosi ezvidzidzo anosanganisira mayunivhesiti, makoreji, uye emhizha kana ekutengeserana zvikoro
Zvimwe zvinodikanwa zvinosanganisira yazvino zvinyorwa zvemakero uye fomu rekuongorora rekuongorora, chinyorwa chinotsanangura zvinangwa zvako uye kuti kupihwa kudzidza kwacho kuchakubatsira iwe kuzviita. Scholarship inopihwa zvichibva pazvinyorwa, hutungamiriri kugona, kubatanidzwa muchikoro uye zviitiko zvemunharaunda, ruzivo rwebasa, kuita kwedzidzo, uye kudiwa kwemari.
Iyi fundo inowanikwa kune vanhu vari kurwa nemamiriro ekurwadziwa akaoma seEhlers Danlos Syndrome (EDS), Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), uye Diki Fibre Neuropathy (SFN).
Chero ani ane chero eakataurwa pamusoro apa mamiriro ekurwadziwa akaomarara uye vamwe vasina kunyorwa pano vanoda kuita dzidzo kuchikoro chesekondari, koreji, yunivhesiti, kana kudzidza pamhepo vanogona kunyorera iyo $ 600 kudzidza.
Iwe unongoda kuzadza kunyorera uye zvinyorwa zvemashoko mazana mashanu kana zvishoma kuzvitsanangura iwe uye nemararamiro auri kuita kunyangwe uine kurwadziwa kusingaperi uyezve kuti kupihwa kudzidza uku kuchakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvedzidzo.
Iyo BRPF inotsigirawo Ehlers Danlos Syndrome kudzidza kune vanhu vanotambura nazvo asi vachiri kuda kuenderera mberi nedzidzo.
Vanhu vane Ehlers Danlos Syndrome kana vane mwana akaremara vanogona kunyorera ichi kudzidza. Iyo iri $ 2,000 kusvika ku $ 4,000 kudzidza yakapihwa kune vaviri kana vatatu vevanhu vakadaro vakatonyoreswa kana kuda kuita muchirongwa chemakore mana kana maviri emakoreji.
Mubhizimisi anofanira kunge ane GPA shomanana ye2.5 nechinyorwa chemashoko mazana maviri kana zvishoma zvichitsanangura zvikonzero nei munhu anenge akakumbira akakodzera kubhadhara uye zvinyorwa zvepamusoro zvedzidzo. Iwo kudzidza kwacho kunowanikwa kune vanhu muUnited States asi kukoshesa kuchapihwa kune vanobva Wisconsin.
Anotumidzwa zita raTony Coelho - aimbova mumiriri weUnited States - uye kuve chikamu chevanopa Ehlers Danlos. Uyu mubairo unobatsira vanhu vane chirwere ichi kuzadzisa zviroto zvavo zvedzidzo, NBCUniversal yanga ichipa mubairo wegore wegore kubva muna 2015 kuvanhu vanotambura nehurema.
Iyo kudzidza zvakare inosvika kune kumwe kuremara kwese zvakare uye inopihwa kune vasere undergraduates uye vakapedza vadzidzi vakaremara senge EDS asi vachiri kuda kuita basa mune rekutaurirana, midhiya, kana varaidzo.
Mudzidzi wega wega achagamuchira mari inosvika madhora zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemashanu kuti abatsire kubhadhara mutengo wedzidzo panzvimbo yavo yazvino yepasekondari.
Kufarira kunyorera? Sangana nezvinotevera zvinodiwa kukodzera:
Vanyoreri vanofanirwa kunge vari kunyoreswa sevadzidzi vegiredhi kana vanopedza kudzidza kuyunivhesiti inozivikanwa kana koreji muUnited States nesemester yekudonha yegore rekunyorera.
Iwe unofanirwa kuziva semunhu akaremara
Unofanira kutora kufarira kutsvaga dhigirii mukutaurirana, midhiya, kana indasitiri yevaraidzo - majors ese anogamuchirwa kunyorera.
Kunyangwe zvisingadiwe kuti iwe uve mugari weUS kuti ukwanise kudzidza uku, unofanirwa kunge uchinyoresa kukoreji kana kuyunivhesiti muUnited States.
Rangarira, iyi dzidziso inopihwa gore rega uye kana iwe usingakwanise kusangana kana kusakunda gore razvino unogona kugara uchitarisa mugore rinotevera woisa.
Mamwe magwaro ekushandisa pamhepo kweNBCUniversal Tony Coelho Media Scholarship mibvunzo mitatu yenyaya, runyorwa, zvinyorwa zvisiri pamutemo, uye tsamba yekurumbidza.
Sezvinoreva zita iri, iyi dzidziso ndeyevanhu vakaremara vanoshandisa wiricheya kana zvimwe nharembozha kutenderera. Vanyoreri vehunyanzvi uhu vanofanirwa kunge vari kunyoreswa muchikoro chesekondari muUnited States uye vanofanirwa kunge vaine makore gumi nematanhatu kana kudarika.
Mubhizimisi anofanira kuchengetedza zvishoma CGPA ye2.0 kuti iongororwe yebhazidzo uye zvinyorwa zvinofanira kupiwa panguva yekushanda. Iwe unonyora uye woisa rondedzero, upe humbowo hwekufamba kwekuremara kureva tsamba yechiremba uye mufananidzo wako wega unozoiswa pamhepo kana iwe ukahwina mubairo.
Ikopi yekufunda iri $ 500 iyo ichapihwa kuvadzidzi vaviri, inopihwawo gore rega kuitira kuti ukarasikirwa negore razvino.
Ndiri kufunga kuti nei kudzidza uku kuri pano?
Huye, vanhu vane EDS dzakakomba vanoda mawiricheya uye kushandiswa kwemamwe mafambiro ekufamba kuti utenderere uye kana uri mumwe wavo usarara pane ichi kudzidza. Iyo Karman Healthcare Mobility Disability Scholarship inokodzera zvachose imwe Ehlers Danlos kudzidza kubatsira vanhu vakaremara.
Iyi fundo yakavambwa mukuremekedza mudiki Hannah Ostrea uyo akafa neiyo Ultra-isingawanzoitika geni kusagadzikana pazera ramakore matatu. Dzidzo ndeyevadzidzi vanotambura nekuremara kusingawanzo, senge Ehlers Danlos Syndrome, asi vachiri kuda kuita chirongwa chekoreji degree.
Iwo kudzidza kwacho kunopihwa gore rega rega kune vadzidzi vaviri vanozogamuchira iyo $ 1,000 mubairo zvichibva pane zvakatumirwa zvinyorwa, kunoshamisa kubudirira mune zvedzidzo, uye nharaunda yebasa. Iyi Hannah Ostrea Memorial College Scholarship ndeimwe yeEhlers Danlos Syndrome kudzidza kubatsira kubatsira kutsvagisa kwekudzidzisa kwevanhu vanogara nayo.
Izvo zvinodiwa kukodzera kweiyo kudzidza ndeye;
Munyoreri anofanirwa kunyoreswa kukoreji yakatenderwa muUnited States kwechirongwa chemakore maviri kana mana emakore.
Anofanirwa kuve mugari weUnited States kana mugari wepamutemo anogara
Mubereki, murwere, kana hama yemurwere anoonekwa aine chirwere chakaomarara chisingawanzo (chirwere kana mupenyu). Zera panguva yekuongororwa kwemwana akabatwa rinofanira kunge riine makore gumi nemanomwe zvichidzika.
Chengetedza GPA ye2.5 kana yepamusoro (GPA isingatariswe yevabereki)
Hauna kugashira iyi kudzidza munguva yakapfuura.
Ichi chizere kudzidza kune vanhu vanorarama neimwe nzira yekuremara kana imwe yakadai seEhlers Danlos Syndrome, ichiita kuti ipfuure seimwe yeEhlers Danlos Syndrome kudzidza.
Iyo McBurney Scholarship yeVadzidzi Vane Urema inongoshanda chete kuYunivhesiti yeWisconsin-Madison, ndiko kuti, vadzidzi vanoda kunyorera ichi kudzidza vanofanira kunyoresa undergraduate kana girajuweta chirongwa kuyunivhesiti.
Iwe unogona kunyorera iyo kudzidza kana iwe uine chirwere chakaremara senge Ehlers Danlos Syndrome (EDS) uye mugore rako rekupedzisira pachikoro chesekondari uye chinangwa chekunyoresa kuYunivhesiti yeWisconsin-Madison. Iwe unogona zvakare kunyorera kana iwe watove wakanyoresa kuyunivhesiti.
Zvimwe zvinyorwa zvekunyorera iyo kudzidza zvinosanganisira maviri mareferenzi tsamba uye chinyorwa chedzidzo. Iyo yakavhurika vagari vemuUnited States, vagari vechigarire, uye vadzidzi vekunze avo vanoda kuuya kuzodzidza muUS futi.
Nyorerera kudzidza kune pano
Iyi hwaro inopa mari yemari kune vadzidzi vakaremara senge Ehlers Danlos Syndrome, cerebral palsy, autism, kupofomara, nezvimwewo.Idzidzo inopfuura seimwe yeEhlers Danlos Syndrome kudzidza sezvo vanhu vane hurema vanogona kunyorerawo.
Zvikwereti hazviitwe zvakananga kune vadzidzi vega pachinzvimbo izvo zvinopihwa nemakoreji nemayunivhesiti ayo akabatana neNewcombe Foundation.
Izvi zvinounza kumagumo kune maEhlers Danlos Syndrome kudzidza uye sezvandambotaura kare, hapana akawanda eaya mabhezari asi iwo ataurwa pano anofanira kuita. Vanhu vakaremara senge Ehlers Danlos Syndrome uye zvimwe zvakaremara hazvingogumiri kune aya chaiwo marudzi edzidzo.
Iwe unogona zvakare kuwedzera yako yekutsvaga uye kunyorera iyo yakajairwa kudzidza iyo yakajairwa vadzidzi vanonyorera, senge Vanier Canada kudzidza, MasterCard Foundation kudzidza, uye vamwe. Kunyangwe hazvo zvavanoda zvinowanzo kuve zvakakwirira kana iwe uchifunga kuti unokwanisa kuzosangana nazvo enda mberi uye unyorere ivo.
Usaise mazai ako ese mudengu rimwe chete, nyorera hurema kudzidza uye zvakare general masomo pamwe nekuwana yakawanda rutsigiro rwekudzidzisa sezvaunogona kuwana. Une chiroto chekutevera, usatendera hurema hwako kukuganhurira, kuenderera, kukwira kumusoro, uye kuzadzisa zvinangwa zvebasa rako.
Wepamusoro 15 Nyore eCanada Scholarship Kune Vadzidzi
13 Yakanakisisa Yakabhadharwa Zvizere Hurumende yeCanada Scholarship
Maitiro Ekuwana Scholarship MuCanada Kune VeDzimba Uye Vepasi Vadzidzi
13 Yakanakisa Injiniya Makoreji MuUSA Nedzidzo
Maitiro Ekunyorera Uye Kukunda Iyo Vanier Canada Vakapedza Kudzidza Scholarship
Mudzidzisi Akazara Scholarships Masters Scholarship Postgraduate Scholarship Matipi eScholarship Kudzidza Kunze Kwenyika Gwara Kudzidza Abroad neScholarship Pasi Pekupedza Kudzidza Scholarship Nyika dzakabatana Scholarships
Ehlers Danlos Syndrome kudzidza
Previous Post:13 Zvikoro zvePamusoro Zvikoro muBerwick
Next Post:18 Mahara Pamhepo Makosi eVadzidzisi Nyanzvi Yekuvandudza
Pingback: 10 Zvakanakisa Down Syndrome Zvikoro muFlorida 2021